Izindaba - I-Xinzi Rain Group yenza izinsiza zamazwe ngamazwe zokushintsha izingubo zangaphansi
I-Xinzi Rain Group yenza izinsiza zamazwe ngamazwe zokwenza ngokwezifiso izingubo zangaphansi
I-Xinzi Rain Group, Kule nyanga, inkampani isungule isizindalwazi samazwe ngamazwe ukuze yenze izinsizakalo zamazwe ngamazwe zokwenza ngokwezifiso izingubo zangaphansi.
Inkampani yethu ihlinzeka ngesitobhi esisodwa “sokugqoka Kwemfashini” kwabesifazane emhlabeni wonke, okwenza abesifazane babe bahle kakhulu, bangabe besaboshiwe, futhi bathole ukuzethemba namandla engeziwe.Imikhiqizo ibihlanganisa Izicathulo Eziphakeme, Amabhuzu, Izingubo Zezemidlalo, Izingubo zangaphansi, zangaphansi, zangaphansi, Obhodisi Abangena Seamless nabangaphansi Kwamahhala, iPlus Size Bra&Brief, kanti eminye ingeyezinkampani ezizimele.
Inkampani yakwa-Xinzi Rain ihlose ukuhlinzeka “Imfashini Yemfashini” endaweni eyodwa kwabesifazane emhlabeni wonke, ukwenza abesifazane babe bahle kakhulu, bangabe besaboshiwe, futhi bathole ukuzethemba namandla engeziwe.
I-Xinzi Rain iklonyeliswe ngezindondo zebhizinisi elisezingeni eliphezulu, amabhizinisi aphucuzekile, ibhizinisi lokuvikela imvelo kanye nemikhiqizo eyishumi ehamba phambili embonini yezingubo zangaphansi yaseShayina.Sibheke phambili ekusaseni, i-Xinzi Rain izohambisana nezikhathi, ihlole futhi isungule, futhi kancane kancane iqhubekele phambili ekuthuthukisweni kwezimboni, ukuhlukahluka, ubuchwepheshe, ukwenza ngokwezifiso kanye nokuqoqa.
Kulo mkhuba omusha wokushintshaniswa kwamanye amazwe, inkampani iXinzi Rain yethule insizakalo yamazwe ngamazwe yokwenza ngokwezifiso izingubo zangaphansi, ukulandelela izidingo ezahlukene zabantu emazweni nasezifundeni ezihlukahlukene, ukuhlinzeka ngesevisi yomuntu siqu, ezintweni, isitayela, usayizi, umbala, i-LOGO nokupakisha. ukwenza ngokwezifiso, ukuhlinzeka ngensizakalo yokwenza ngokwezifiso esheshayo, ephumelelayo, yobungcweti nethembekile.
Ukubonisana nezingubo zangaphansi zabesifazane zangokwezifiso Isevisi yezingubo zangaphansi: i-OEM/ODM, isevisi yokuklama, ukwenza amasampula, i-MOQ, ukukhiqizwa kwenqwaba, isikhathi sokulethwa, isikhathi sokuthumela, isiqinisekiso sokukhokha kwakho, imboni yethu, abantu bethu, imikhiqizo yethu njll., pls bazizwa mahhala ukusithumela i-E-mail, shiya umlayezo wakho, wengeze inombolo ye-whatsapp, noma usishayele, wamukelekile kakhulu!